ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဝရ်ှများ | တိုယိုတာဝရ်ှကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Honda Hyundai Mitsubishi Nissan Toyota
Estate Car (78)
A/C: Front (72)
A/C: Rear (30)
Cassette Radio (71)
Wish ကို ကားကောင်းရှာနေသူများအတွက် မိသားစုစီးလို့ လဲအဆင်ပြေသော အတွင်းခန်းကျယ်ကျယ်နဲ့ဆီစားအရမ်းသက်သာသော ကားရှယ်လေးကို ဈေးအတင့်အသင့်ဖြင့်ရောင်းပေးမည်။ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Lks 217 ညှိနှိုင်း
Blue Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Grey Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Pearl White Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Pearl white Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Black Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Lks 234 ညှိနှိုင်း
Lks 222 ညှိနှိုင်း
Red Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Silver Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 259 ညှိနှိုင်း
Grey Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Black Toyota Wish 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pass...
Lks 269 ညှိနှိုင်း
တိုယိုတာ ၀စ်ရ်ှကားတွေဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကနေစပြီး တိုယိုတာ ကုမ္ပဏီ ဘရန်ကနေ ထုတ်တဲ့ ကွန်ပတ် MPV လို့ခေါ်တဲ့ ( မားတီး ပါပို့စ် ) ခရီးသည်တင်နဲ့ ပစ္စည်းတင်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ မားတီးပါပို့စ် ဗန်အသေးစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ခုံ လူစီး ၆ ယောက်ကနေ ၇ယောက်ထိ စီးနင်းနိုင်ပြီး ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် ၁၈၀၀ စီစီနဲ့ ၂၀၀၀ စီစီဆိုပြီး ၂မျိုးထုတ်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ ကိုယ်ထည် အနေအထားကြီး အသေးက တိုယိုတာဘရန် မီနီဗန် အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ အပဆမ် တွေထက် သေးပြီး တိုယိုတာ စပစီအို ထက်ကြီးပါတယ်။
ပထမမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၀၉ထိ မျိုးဆက်နဲ့ ၂၀၀၉ကနေ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ မော်ဒယ်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းပြောင်းလဲမှု အနေနဲ့ ရုပ်ပုံ၊ အစိတ်အပိုင်းများ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲ တိုးတက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာကုမ္ပဏီဟာ ဌင်းရဲ့ ဘရန်ထဲမှာ အမျိုးအစား တော်တော်များများကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဘရန် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဌင်းရဲ့ မီနီဗန် အမျိုးအစားတွေထဲမှာ ဆိုရင်တော့ တိုယိုတာ ၀စ်ရှ် အပါအ၀င် တိုယိုတာ အပဆမ်နဲ့ တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဗာဆိုလို့ လည်းခေါ်တဲ့ စပစီအို ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ၀စ်ရ်ှကားတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ လူစီးများတဲ့ ကား အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၀၃ ကနေ စလစ်လွတ်သွင်းနိုင်တဲ့ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေအထိ အသွင်းများ အစီးများ ကြပါတယ်။
နှစ်ဘီးမောင်းတွေ ရှိသလို လေးဘီးမောင်းတွေလည်း ရှိပြီး ချဲဆီးပေါ်လိုက်ပြီး ကွာသွားပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းတွင် ၁၈၀၀ စီစီအင်ဂျင်သာ လာပြီး S,G,X စသည့်ဖြင့် ကားဂရိတ်တွေ ကွဲသွားပါတယ်။ နှစ်ဘီးမောင်းတွင် အင်ဂျင် ၂၀၀၀စီစီ၊ ၁၈၀၀ စီစီ နှစ်မျိုးလုံးရနိုင်ပြီး ၂၀၀၀ စီစီအင်ဂျင်ရှိတဲ့ Z ဂရိတ်ကတော့ ၆ယောက်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ ၇ယောက်စီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေမှာ 2ZR-FAE လို့ခေါ်တဲ့ တိုယိုတာ ရဲ့ ZR အင်ဂျင်အုပ်စုထဲကအင်ဂျင်ကို သုံးပြီး အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်မှာကတော့ စွမ်းရည်ကို တိုးမြင့်ပေးပြီး ဆီစားကို သက်သာစေတဲ့ Valvematic ကို သုံးထားပါတယ်။ မြင်းကောင်ရေ ၁၄၀ ကျော်နီးပါး ထုတ်လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ယခင် အသုံးပြုထားတဲ့ အင်ဂျင်ထက် ၁၀ချိုး ၅ ချိုး ဖြစ်တဲ့ တစ်ဝက်နီးပါး ဆီစား သက်သာတယ်လို့ တိုယိုတာ က ဆိုထားပါတယ်။
မျိုးဆက်နှစ်ဆက်မှာ ဒီဇိုင်းက တော်တော်များများ ခြားနားသွားပါတယ်။ ကားအပြင်ပိုင်းက အရှေ့ဖက်ပိုင်းအနေနဲ့ မီးလုံးပုံ၊ ဗန်ပါ ဒီဇိုင်း၊ တံဆိပ် တွေကအစ ကွဲပြားသွားပါတယ်။ ၂၀၀၉ မော်ဒယ်တွေက မီးလုံးတွေ ပိုချွန်ပြီး ပိုကျဉ်းသွားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အနောက်ပိုင်းကလည်း မသိမသာ ခြားနားသွားပြီး မီးလုံးတွေမှာ ကွာပါတယ်။ မှန်အရစ်ဖော်တာကိုလည်း အောက်ကို လျှောသွားတဲ့ ဒီဇိုင်းလုပ်ထားပြီး မီးလုံးတွေကတော့ တော်တော် ပြောင်းသွားပါတယ်။ အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်း အနေနဲ့ မီနီဗန်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူစီးကို ဦးစားပေးပြီး ကား ဂီယာဘောက်ကို ဒတ်ရ်ှဘုတ်မှာပဲ တစ်ဆက်တည်း သွားထားပါတယ်။ တီဗီနေရာ အတွက်ကတော့ ကားဂီယာ ဘောက်စ်ရဲ့ အထက်မှာ အရင်အတိုင်းပဲ ပြုလုပ်ပေးထားပြီးဒတ်ရ်ှဘုတ် ပုံစံနဲ့ အခြား ပုံစံ တော်တော်များများ ပိုမို ခေတ်ဆန် ပြောင်းလဲ တိုးတက်ထားပါတယ်။ ထိုင်ခုံ (၃) တန်းပါရှိပြီး အနောက်နဲ့ အရှေ့မှာတော့ နှစ်ယောက်ထိုင်ဖြစ်ပြီး အလယ်ခုံကတော့ (၃) ယောက်ထိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ပိုင်းမှာ လူမထိုင်ဘဲ ခုံကို ခေါက်ထားပြီး ပစ္စည်း တင်လို့လည်း ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်တွေကတော့ အင်ဂျင် ပွတ်ရှ် စတပ်တွေပါ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
ပါဝါ လောခ့်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ လေအိတ်၊ ဒရိုင်ဘာ လေအိတ်၊ ပါဝါ ၀င်ဒိုး၊အနောက်ဖက် ပြတင်း ၀ိုက်ဘာ၊ မှန်အရောင် နဲ့ စတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းတွင် တိုယိုတာ ၀စ်ရ်ှတွေကို တစ်ပတ်ရစ်သာအများဆုံး ၀ယ်ယူစီးနင်းကြပါတယ်။ လေလံကနေ မိုင်လစ်နည်းတဲ့ကားတွေကို ဈေးကောင်းပေး ၀ယ်ယူကြပြီး စီးနင်းကြပါတယ်။ ၂၀၁၃ မော်ဒယ် အထိရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၃ မော်ဒယ်အတွက် ၁၃၀ သိန်းကနေ ၁၆၀ သိန်း အထိ ရှိနိုင်ပြီး ၂၀၀၉ မော်ဒယ်ဆို ကျပ်သိန်း ၂၉၀ ကနေ ၃၁၀ သိန်း အထိ ဈေးပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ မော်ဒယ်ဆို ကျပ်သိန်း ၃၃၀ ထိ ဈေးရှိပါတယ်။
ထိုကြောင့် ၂၀၀၃ မော်ဒယ်ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ၀စ်ရ်ှလေးတွေဟာ ဈေးနှုန်းမှာ ပျဉ်းမျှ ၁၅၀ သိန်းလောက်ဖြင့် ရနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး မိသားစု စီးဖို့အတွက် သင့်လျော်ပြီး ဒီဇိုင်းလည်း လှပတာကြောင့် တိုယိုတာ မီနီဗန် အုပ်စုထဲက စီးနင်းဖို့အဆင်ပြေတဲ့ ကားအမျိုးအစား တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။